[တရားဝင်] dr.fone - iOS ကို Data Recovery: iOS ကိုဖုန်းများအတွက်အပေါ်အားဖျက်သိမ်းပြီး / ပျောက်ဆုံးသွားသောမှာ Data Recover
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Data Recovery
ကမ္ဘာ့ 1st က iPhone နှင့် iPad ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ။
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, မှတ်စုများ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများနှင့်ပိုပြီး Recover ။
နောက်ဆုံးပေါ် iOS ထုတ်ကုန်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့။
မေ့လျော့ Password ကို
iOS အတွက် update ကိုမှမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ
jailbreak သို့မဟုတ် ROM ကိုတောက်ပပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးဒေတာများ
Device ကိုသော့ခတ်သို့မဟုတ်မေ့နေတာလား password ကို
အခမဲ့အဘို့အားဖျက်သိမ်းပြီးဒေတာများကို Check & Preview ကို
သင်သည်သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ပေါ်မှာရှိသမျှကိုဖျက်လိုက်ပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ scan ဤ iOS ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးကိုသုံးပါနှင့်အခမဲ့များအတွက်အသေးစိတ် preview နိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်နှင့်အခမဲ့ကြည့်ရန် iCloud Backup ကိုအကြောင်းအရာ
အဆိုပါ iCloud backup ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး extract လိုပါသလား? ဤသည်ကို iOS ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသငျသညျအခမဲ့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါနှင့်သင်သိပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့အဘို့သင့်ရဲ့ iTunes ကို Backup ဖိုင်ကို Read
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒီ iOS က data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ software ကိုမစဉ် Apple ကလူတွေ iTunes ကို backup ဖိုင်ကိုများ၏ content ဖတ်ရှုဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, ထိုသို့အခမဲ့ဖွင့်ကိုငါသိ၏။
1 ကို Preview ဖို့ကိုနှိပ်ပါ & သင့်ဒေတာများ Print
ဒါဟာတစ်က iOS ဒေတာဆယ်တင်ရေးကိရိယာတခုထက်ပိုပါတယ်။ သင်စကင်ရလဒ်အတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသငျသညျထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်တဲ့အခါ, သင်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာ preview နဲ့ print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ One-click နှိပ်ပြီးအလုပ်ပါပဲ။
18 ဖိုင်မှတ်တမ်းအမျိုးအစားများမှ Up ကို Recover
ဤသည်ကို iOS ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသငျသညျ 18 ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုမှတက်, အဆက်အသွယ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, မှတ်စုများ, သမိုင်းကိုပဌနာ, သတိပေးချက်များ, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့ဒေတာကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျလိုချင်တာတွေကို select recover
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch scan ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် iTunes ကိုသို့မဟုတ် iCloud backup ဖိုင်တွေမဖြည်ပြီးနောက်သင်ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ device မှာသူတို့ကိုပြန်လည်နာလန်ထူချင်ဆိုပစ္စည်းများ preview နှင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလုံးဝကိုသင်မှတက်ပါတယ်။
ဤသည်ကို iOS ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုလုံးဝကိုဖတ်ရှုသာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
အပြီးအစီးကို iOS အသုံးပြုပုံများ
အိုင်ပက် Pro ကို, အိုင်ပက်လေတပ်, အိုင်ပက်မီနီ, နှင့် iPad အားလုံးမော်ဒယ်များ
3 Data Recovery နည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့ iTunes ကို backup လုပ်ထား Extract နှင့်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူ
သင့်ရဲ့ iCloud backup လုပ်ထား Extract နှင့်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူ
ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ!
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Recovery ကို
ဒေတာအားလုံးကို Recover, ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်များကိုကို select
တည်ဆဲဒေတာကို overwrite လုပ်တဲ့မည်မဟုတ်ပါ
သင်သည်သင်၏ account ကို access လုပ်နိုင်မှသာလျှင်
3 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ: ချိတ်ဆက် scan နှင့် recover
အားလုံးဖျက်ပစ်ဓါတ်ပုံကိုတွေ့နေကြပါတယ်။ အကြောင်းကိုမိနစ် 30 ကိုယူ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို installation ကိုအချိန်အများကြီးယူမထားဘူး။ သငျသညျအင်္ဂလိပ်ကိုသိလျှင်, အရာရာအများကြီးပိုမြန်တတ်၏။ ငါအရေးပေါ်အခြေအနေကိစ္စများတွင် program ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဓါတ်ပုံများ၏အောင်မြင်သောပြန်လည်နာလန်ထူဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖျက်ပြီးဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဒီပရိုဂရမ်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလိုအပျသောသတငျးအခကျြကိုဖျက်ပစ်လျှင်ငါသည်ဤအစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲဖို့လူတိုင်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်
ကောင်းသောအစီအစဉ်။ ကလူပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါဖန်တီးသူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတကယ် app များကို restore ဖို့လိုအပ်သူတွေကိုအများကြီးသုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။ ဒီ program ကို install လုပ်ဖို့မကြောက်ပါနှင့်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖျက်ပစ်မှတ်ချက်များ recover ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်ဆိုသောကြောင့်
iPhone ပေါ်မှာ Deleted စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover3နည်းလမ်းများ
စိုက်ထားသော Broken iPhone မှဒေတာများပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း
iPhone ပေါ်မှာခေါ်ရန်သမိုင်း Recover လုပ်နည်း (iPhone ကို7Plus အား /7ပါဝငျ)
iPhone ကို (ပါဝငျ iPhone ကို7Plus အား / 7) မှပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံ Recover လုပ်နည်း
စက်ရုံ Settings ကို Restoring ပြီးနောက် iPhone ကိုဒေတာများပျောက်ဆုံးသွားသော Recover လုပ်နည်း
(Plus အား) / 6s (Plus အား) iPhone ကို7ရက်နေ့တွင်အားဖျက်သိမ်းပြီးဗီဒီယို Recover လုပ်နည်း /6(Plus အား) / 5s / 5c /5/ 4s / 4
iPhone ကို7/ 6s /6/ 5s / 5c /5/ 4s /4/ 3GS ပေါ် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်နည်း
Backup ကိုမရှိရင်အားဖျက်သိမ်းပြီး iPhone ကိုဆက်သွယ်ရန် Recover လုပ်နည်း
iPhone ကို (iPhone ကို7Plus အား /7ပါဝငျ) မှ iMessage Recover လုပ်နည်း